अन्तिम दागबत्ती - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
अन्तिम दागबत्ती | Saturdayकलम | Kavyalaya
Background Image Source: No Smoking from WallpaperTAG
by किरण चौलागाईं August 3, 2019
बाजेले सौता हाले । बजै तिमीलाई भित्र्याउनु भन्दा धेरै अगाडि बाजेले बीडीको ठुटोलाई एकापट्टीबाट ओठको स्पर्शले र अर्कोपट्टिबाट सलाईको काँटीले एकैसाथ सिन्दुर र दागबत्ती दिएका थिए । बजै सौता त तिमी बनेर आएकी थियौ ।
बाजे ठुटोसँग अट्टाहस प्रेममा थिए । बाजे र बीडी बीचको प्रेम खुब ज्यानमारा थियो । बीडीको धुवाँ बाजेको फोक्सोभित्र गइ बाजेलाई मार्ने कोसिसमा रहन्थ्यो भने बाजे बीडीको ओठ चुमी सकेर , बीडीको ठुटोलाई गोडाले किचेर मार्थे । तर बाजेभने ठुटोसँग अट्टाहस प्रेममा थिए !
बाजे ज्योतिष थिए । उनी दिनभरि मान्छेको हस्तरेखा र चिनामा हराउँथे । अनि निकाल्दै जान्थे हिसाब मान्छेको आयुको, हुने आयआर्जनको, कतिन्जेल उसको निधार खुम्चने हो ? कुन उमेर वा समयबाट फुल्नेछ उसको मुहारमा गुराँस ? उनी ज्योतिषी भाषामा सबै-सबै निकाल्थे । कहिले देउराली , कहिले चौतारी हुँदै । कहिले पिपल बोट त कहिले गैरीगाउँ हुँदै । उनी यसरी गाउँ-गाउँ चहार्दै भेला पारेको चामल र मिस्री घरकी कान्छीलाई जिम्मा लगाउथे ।
बजै दिनदिनै बाजेलाई पसिनाको गन्ध आउने भात पकाउथिन् । उनी दिनैपिछे बाजेको गुलियो मिहिनेत मिसिएको मिस्री सिलौटोमा पिसेर खान्थिन् । तर जब बजै, बाजेको ओठमा सल्किरहेकी उनकी जेठी सौतालाई देख्थिन् , उनका आँखाले जल्दै गरेको ठुटोलाई जलेरनै हेर्ने गर्थिन् ।
तर सुरुमा शिरमा सजिएर , शिरबाट सल्कदै ,पाउमा पुगेर ,पाउले कुचिएर मर्न बानी परेपछि, ठुटोपनि बाजेको अट्टाहस प्रेममा परेको थियो । यसैगरि प्रेमपुर्वक ठुटोले बाजेलाई मार्दै गयो । बाजेले पनि प्रेमपुर्वक ठुटोलाई महसुस गर्दैगए । बजैले पनि घृणापुर्वक सौतालाई आँखा तर्दै गइन् ।
तपाईहरु चाहे कुनै लक्ष्य भेट्न/पुरा गर्न निस्कनुस् । चाहे तपाई कोहि अन्जानलाई पहिलोपटक भेट्न निस्कनुस् । चाहे तपाई कुनै रमाइलो यात्रामा निस्कनुस् । या त तपाई जिन्दगीको मञ्मा नृत्यमग्न हुन निस्कनुस् । तपाईले तपाईलाई हरबखत, हरक्षण विश्वास गर्नैपर्छ । तपाई विश्वस्त हुनैपर्छ । जसरी मृत्यु जीवनप्रति विश्वस्त हुनेगर्छ ।
केहि दिनदेखि, बाजे निकै गलेको जस्तो देखिन थालेका थिए । उनी घन्टौंसम्म टाउको हातले समाइ, ओछ्यानमा पल्टिरहन्थे । बेलाबेला खकारमा/नाकबाट रगत बग्न थालेको थियो । यसरी बाजेलाई कसैलाई नसर्ने तर मृत्युको नजिक सर्दै जाने रोग लागेको थियो । क्यान्सर भएको थियो । उनलाई रातारात राजधानी कुदाइयो । पुर्याइयो प्रतिष्ठित डाक्टरहरु भएको हस्पिटलमा !
तर सारा जगतको भविष्य बताउने ज्योतिष बाजेले, आफ्नो भने भविष्य देख्न सकेनन् । छिनछिनमा ठुटोलाई दागबत्ती दिइरहने ज्योतिष बाजे, हप्तादिन अगाडि आधा खाएर आधा कोठाको झ्यालमै छोडेर राखेको ठुटोलाई पनि अन्तिम दागबत्ती दिन भ्याएनन् ।
बाजेले आफ्नै आयुको हिसाब लगाउन सकेनन् । थाहा पाएनन्, जीवन मृत्युसँग नजिकिदै गयो कि मृत्यु जीवनसँग ? थाहा पाएनन् जीवनले मृत्युलाई ओठमा च्यापेको थियो कि मृत्युले जीवनलाई ? जब उनलाई घाटको छातिमा राखेर दागबत्ती दिन थालियो । तब उनले थाहापाए, मृत्युपनि जीवनसँग अट्टाहस प्रेममा रहेछ भनेर ।
बाजे मरेपछि बजैको साहरा कोही भएन । ३ वटै छोरा, बाबुको काजकिरिया सकेपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लागे । बजै घरमा एक्लै भइन । अब उनलाई केहि गर्ने मन भएन । बजै सधैँ पिडीँमा बसेर टोलाइेहन्थिन् !
एकदिन बाजेको सिरानीमा बजैले एक प्याकेट बीडी भेटाइन् । उनले त्यो बिडीलाई एकछिन टोलाएर हेरिन । त्यसपछि, उनको मनमा के आयो कुन्नी ? ऊ सिधै भान्सा छिरिन् र चुलोमा पुगेर बीडी सल्काइन् र धुवाँहरुलाई अन्धाधुन्ध उडाउन थालिन् ।
त्यसदिनबाट बजै रोज बीडी पिउने भइन् । बीडीको ठुटालाई चुमी रहदा, बाजेको याद आएर उनी भावुक पनि हुन्थिन् भने आफ्नै जेठी सौतालाई रोज मार्न पाएकोले खुशी पनि हुन्थिन् । तर यो खुशी र आँशुको नापतौल गर्न उनले बीडी पिएकी थिइनन् । उनलाई थाहा थियो यसरी उनले बीडी पिइरहिन् भने, छिट्टै नै उनी बाजे भएको ठाउँमा पुग्थिन् ।
त्यसदिन देखि बजै आफ्नो ‘दागबत्ती’को व्यग्र प्रतिक्षामा थिइन् भने बीडी, कुन चै आफूले बजैको ‘अन्तिम दागबत्ती’ लिन्छ भन्ने पर्खाइमा । बजै बीडीसँग प्रेममा थिइनन् तर बीडी भने बजैसँग अट्टाहस प्रेममा थियो ! एकोहोरो प्रेम !
Image Source: PipeDream from abstractoilpainter
पथरी शनिश्वरे बुक क्लबको आयोजनामा “छुटेका अनुहार” को विमर्श